Home » Travel Associations News » Fizahan-tany any Shina any Thailand: mihoatra ny Pandas
The ny panda goavambe voajanahary sy tsy hay tohaina no iray amin'ny sary malaza indrindra amin'ny Shina, rehefa nahazo ny fon'ny mpankafy tsy tambo isaina manerantany.
On Septambra 24th, ilay “Sina tsara tarehy, betsaka noho Pandas” Sichuan fanentanana fampiroboroboana ny fizahan-tany, nampiantrano avy amin'ny China National Tourism Administration ary nokarakarain'ny Sichuan Tourism Administration, tonga tao Chiang Mai, Thailand. Nahazo vahana ny singa panda famoronana fiderana ary nofaohin'ny tafio-drivotra ny tanàna.
Tazo Panda manana miparitaka Chiang Mai. On ny tolakandron'ny Septambra 24, ao anatin'ny Maya Lifestyle Shopping Center, toeram-pivarotana mega an'izao tontolo izao sokafana farany Chiang Mai, fampisehoana lohahevitra "panda lohahevitra" manaitaitra sy maneho endrika kanto. Tarehimarika panda maro avy Sichuan asio fampisehoana fandihizana mampientana izay talanjona ny mponina sy ny mpizahatany.
Taorian'ny nifaranan'ny "panda flash mob" dia nitangorona ny mpitsidika sy ny mpizahatany mba haka sary miaraka amin'ireo tarehimarika panda ary nandray Fampiroboroboana ny fizahan-tany Sichuan akora.
Ilay faritra kely panda DIY dia nalaza ihany koa. Ireo modely panda fotsy samy hafa dia nanentana ny fanahy naka sary an-tsaina amin'ny mponina sy mpianatra ary maro no tonga nandoko ny maodelin'ny panda azy manokana. Navoaka ny fahaizan'izy ireo ary tsy ela dia nisy zavakanto panda fomba Thai, izay nanjary diaankasitrahana sy raisin 'ny besinimaro tsara. Ny lanonana fifantenana sy fampisehoana mari-pankasitrahana teo an-toerana dia nanosika ny fahaveloman'ny atmosfera ahaavo vaovao.
Mandritra izany fotoana izany, amin'ny maha tapany tsy mitombina an'ny “Sina tsara tarehy, betsaka noho Pandas” Sichuan fanentanana fampiroboroboana ny fizahan-tany manerantany, tamin'ity indray mitoraka ity dia niditra tao amin'ny Oniversiten'i Chiang Mai ny hetsika fidirana mpankafy panda "miditra amin'ny oniversite malaza" an fisoratana anarana an-tserasera sy fandraisana mpiasa an-toerana, mpankafy panda valo no natambatra tamin'ny laharana. Ireo mpankafy ny panda dia hanana fotoana hitodihana Sichuan hitsidika ny Panda Base.
Ity fanontana ny doka fanentanana ity dia a voakasik'ireo matihanina amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy ny mponina amin'ny ankapobeny. Haino aman-jery sinoa sy vahiny efa ho 130 no nitory ny hetsika, nanentana tamim-pahombiazana onja lazan'ny Sichuan fizahan-tany mampiditra hery vaovao amin'ny fifanakalozana sy ny fitomboan'ny tsenan'ny fizahantany sy ny sehatry ny Sichuan ary Thailand.